Medical Writings ဆေးပညာစာများ: Q and A August 2010 (1)
Q and A August 2010 (1)
1. ဆရာခင်ဗျား ကိုယ်ဝန်တားနည်းတမျိုး ကြားရလို့ပါ။
2. အစာအိမ် မကောင်းတာ ကြာပါပြီ၊
3. ပုံမှန်ရာသီ လာပေမယ့်၊ ပျို့ အန်ချင်သလို ဖြစ်နေရင် ကိုယ်ဝန်ရှိနိုင်ပါသလား။
Q 1: ကိုယ်ဝန်တာနည်းတမျိုးကြားရလိုပါ။ လက်မောင်းထဲ ဆေးတောင့်ထည့်တာလို့သိရပါသည်။ မည်ကဲ့သို့ဟာမျိုး ဖြစ်သလဲဆိုတာ နားမလည်ပါ၍ ဆရာဆီ အကူအညီတောင်းခံပါသည်။ ရှင်းပြပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံပါသည်။ အမျိုးသမီး လက်မောင်းထဲ ထည့်တာဟုသိရပြီး ဆင်ခြေဖုန်း ရက်ကွက်များတွင် WHO မှ လုပ်ပေးနေသည်ဟု သိရပါသည်။ ရန်ကုန်ရှိ ဆေးခန်းများတွင် လုပ်၍ရမရလည်း သိချင်ပါသည်။
A 1: The contraceptive implant အရေပြားအောက် ထည့်ရသည့် ဆေးချောင်း၊ ဆံညှပ်အရွယ်၊ ကွေးနိုင် ဆန့်နိုင်သော ပြွန်ချောင်းလေးတခု ဖြစ်သည်။ လက်မောင်း အတွင်းဖက် အရေပြားအောက်၌ ထုံဆေး-ပိုးသန့်ခြင်းနည်း သုံး၍ ထည့်ထားရသည်။ ၄င်းမှ Progestogen ဟော်မုန်းအား ၃ နှစ်ကြာ ထုတ်ပေးနေမည်။ Implanon ဟု ဆေးနာမည် ခေါ်သည်။
Progestogen ဟော်မုန်းသည် လစဉ် မ-မျိုးဥအိမ်မှ မမျိုးဥမထွက်စေရန် တားဆီးသည်။ သားအိမ်အဝရှိ ချွဲကြိသည့် အရည်သည် ပြစ်စေးလာစေကာ ကျားသုတ်ပိုးအား သားအိမ်ထဲ မဝင်စေအောင် တားထားသည်။ သားအိမ် အတွင်းသား နံရံကို ပါးလွှာစေသဖြင့် သန္ခေဥ တွယ်ကပ်ခြင်းကိုလည်း တားဆီးပေးသည်။ ၉၉% မက ထိရောက်သည်။ အလေးချိန် များသူများလည်း သုံးနိုင်သည်။ လစဉ်ရာသီလာအပြီး ၅ ရက်မြောက်နေ့မှ စထည့်ထားပါက ချက်ချင်း ထိရောက် ကာကွယ်သည်။ ကလေး နို့တိုက်ခြင်းကို သက်ရောက်မှုမပြု။ လစဉ် ရာသီမလာမီ လက္ခဏာများကို သက်သာစေသည်။
သို့သော် ရာသီဆင်း များတတ်သည်။ မမှန်ဖြစ်တတ်သည်။ ဝက်ခြံပေါက်တတ်သည်။ ရင်သား တင်းတတ်သည်။ ကိုယ်ဝန် ရှိနေလျင်၊ အသဲရောဂါ ရှိနေလျင်၊ ယခု သို့မဟုတ် လွန်ခဲ့သော ၅ နှစ်က ရင်သားကင်ဆာရှိလျင်၊ သွေးကြောကျဉ်း ရောဂါ ရှိလျင်၊ (မိုင်ဂရင်း) အမူးရောဂါ ရှိလျင် မသုံးသင့်။
Different Methods of Contraception ပဋိသန္ဓေတားနည်းများ တွင် ဖတ်နိုင်ပါသည်။
Q 2: အစာအိမ်မကောင်းတာကြာပါပြီ၊ Barium meal X'ray ရိုက်ဘူးတယ်၊ H pylori အတွက် endoscopy & biopsy လုပ်ပြီး H Pylori ရှိတယ်ဆိုလို့ ဆေးစားပြီး စစ်တော့ ကောင်းသွားပြီဆိုလို့ အစားလဲသိတ်မရှောင်ရတော့၊ ဒါပေမဲ့ တလလောက်မှာ ဒိုင်းကနဲ ပြန်ဖြစ်တာ-လေပြန်ထဒါ၊ တဖြေးဖြေးနဲ့ပိုပိုဆိုးလာတာ-အခု - ကော်ဖီ၊ လဖက်ရည်၊ ငရုပ်သီး၊ မဆလာ၊ ခရမ်းချင်သီး၊ လိမ်မော်သီး စားလို့မရ၊ သောက်လို့မရပါ၊ anti acid တွေသောက်နေရ၊ အခု့ nexium တနေ့တလုံးသောက်၊ ဒီကြားထဲ လိုရင်လိုသလို anti acid လဲသောက်ရပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာ ရင်ညွန့်အောင့်လို့ gas pressure လာလာဆေင့်တဲ့ သဘောပါ။ နောက်လေ့လာကြည့်တာ anti acid ထဲက calcium ကြောင့်မသင်ကာတာနဲ့ anti acid တတ်နိုင်သလောက် မစားဘဲနေတော့ အောင့်တာ gas pressure ဖြစ်စင်နဲသွားပါတယ်။ အခု Nsaid တွေ သောက်နေရလို့ anti acid နဲ့ Buffer လုပ်ပြီးသောက်နေရပါတယ်။ ကော်ဖီ ပြန်သောက်နိုင်အောင် ဘာ ဆက်လုပ်သင့်ပါသလဲ၊ အကြံပေးပါရန် -
A 2: အစာမကျဖြစ်ခြင်း Indigestion နဲ့ ရင်ပူလောင်ခြင်း heartburn အတွက် လူသန်းပေါင်းများစွာ မှီဝဲသုံးစွဲနေကြ တဲ့ Proton pump inhibitors တွေဖြစ်ကြတဲ့ Omeprazole (Prilosec), Lansoprazole (Prevacid), Rabeprazole (Aciphex), Pantoprazole (Protonix), Esomeprazole (Nexium), and Zegarid ဆေးတွေကြောင့် Osteoporosis အရိုးရောဂါ ဖြစ်စေတယ်လို့ ၃ဝ-၅-၂ဝ၁ဝ နေ့က လန်ဒန်မှာ သုတေသနစာတမ်းတခု ထုတ်ပြန်လိုက်တယ်။
6 Aug 10, 22:18
Q 3: လိင်ဆက်ဆံပြီးနောက် လစဉ် (၂လ ရှိပါပြီ) ပုံမှန်ရာသီလာပေမယ့်၊ ပျို့ အန်ချင်သလို ဖြစ်နေရင် ကိုယ်ဝန်ရှိနိုင်ပါသလား။ ကျွန်တော် သိထာတာကတော့ လိင်ဆက်ဆံပြီး ရာသီမလာတော့ရင် ကိုယ်ဝန် ရှိတယ်ဆိုတာကို သိထားပါတယ်။ ရာသီလာပြီး ကိုယ်ဝန်ရှိနိုင်ပါသလား။ ဘယ်သူမှ မရှိဘူးထင်ပါတယ်။
A 3: ရာသီလာတာ မှန်ရင် ကိုယ်ဝန် မဟုတ်နိုင်ပါ။ သွေးဆင်းတာက ရာသီမဟုတ်ဘဲ ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျတာလည်း စဉ်းစားရအုံးမယ်။ ပျက်တာဆိုရင် ဆီးစပ်နာတာ၊ ခါးကိုက်တာတွေပါ တွဲရှိနိုင်တယ်။ ဆင်းတာလဲ ခါတိုင်းထက် များများလာမယ်။ ရက်လဲ ကြာမယ်။ ပျို့ချင်၊ အန်ချင်တာ တခြားအကြောင်း ရှာရပါမယ်။ သေချာချင်ရင် ဆီးစစ်ပါ။ Urine pregnancy test kit ကို အလွယ် ဝယ်လို့ရပါတယ်။
Posted by Dr. Tint Swe at 8:04 PM